10 Egqibeleleyo zobhaka Ukuze Zama EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Egqibeleleyo zobhaka Ukuze Zama EYurophu
Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 07/06/2020)
Abahambi nge nezinyo esimnandi, Qwalasela! Kungenzeka ukuba ndicinge ukuba ahambe lonke elaseYurophu nje ngenxa ngokuzama dessert, kodwa kufanele. IYurophu ezinye okuluncuthu fantastic ukuba uya kukuzisela wena ngakumbi isiko yelizwe othandana uhlola. Plus, baza bathanda ungcamla incasa. Yintoni ukuba ukuthanda?
Ukuba mbono izandi umdla ngokwaneleyo ukuzama wena uyazibuza ukuba uqale apho, abazikhathazi. Ukuze ukwazi isigqibo, siye liqulunqe uluhlu elithozamisayo 10 Egqibeleleyo zobhaka ukuzama lakho lokuya eYurophu. Makhe abe sihlolisise kubo:
1. Amsterdam, the elamaDatshi - Patisserie My Little
Yinto kunqabile ukuba nazo-eyenziwe kakuhle izibiliboco French kwamanye amazwe, kodwa akukho ukukhathazeka - le Umbhaki French. Patisserie My Little inika zonke iintlobo izinyo sweet French iyandiyolisa, kuquka chouquettes kunye eclairs, phakathi kwezinye amakhono.
Ne design yemveli French, Patisserie My Little ikukhumbuza ngokugqibeleleyo umoya France kwi setting Dutch. Yintoni egqithisile, nabo usebenzise iiresiphi yemveli French ukuba akasoze asilele ukwanelisa iminqweno yakho. Ungaphoswa le ndawo Ukuba uzufumana urholela ku Amsterdam!
2. eRoma, Italy - Bakery House
Le yokubhaka yenye obonakala intlanzi-out-of-kwamanzi imeko, njengoko akukho zonke omnikelo Italian. kunokuba, iNdlu Bakery kakhulu iikeyiki, yenziwe ngqongqo American owuthandayo ukuba ingaba umnandi akunakuze ufuna ukushiya.
Eyona nto intle malunga Bakery House ke iintlobo ntlobo, ubuncinane apho ungcamla ukunambitheka bakhathazekile. Kodwa ke ngenxa yokuba akunakwenzeka kuphela ukuzama ikhekhe enye, umzimba wakho beach akayi enkosi. kunjalo, ezi Yimalini kunokuba kukuchitha i iiyure ezimbalwa elingakumbi yokwenza umthambo ukuze ayitshise off calories.
3. eRoma, Italy - Biscottificio Innocenti
Ukuba ufuna ngokungqongqo Italian dessert, Biscottificio Innocenti uya ukudanisa nawe. Lulandelwe ngokwenene endaweni yayo phakathi 10 Egqibeleleyo zobhaka ukuzama lakho lokuya eYurophu ngenxa biscotti yayo. Ivenkile yivenkile encinci enezinto ezinkulu ezivelisa iibisikethi ezimnandi kakhulu oya kuzenza zama e-Itali.
Kwaye aniyi kuyifumana iresiphi kubo naphi - Biscottificio ugcina ezifihlakeleyo yayo. Qinisekisa ukuba isampula yabo Brutti ma Buoni. It is a umqathane zimile yephiramidi ukuba uza kukwazi ukufumana kwanele.
4. Paris, France - isonka Ezinye Ideas
Igama le yokubhaka emangalisayo izindawo bubonakala Isonka Ideas, nto igama eliphefumlelweyo ukuze ukudla idolo. Yaye ngoxa igama labo ithetha ekuthatheni izifundo njengeziphambili isonka, yiloo nto yonke asukuba ewusondeza.
Unako kwakhona ukonwabela croissants zabo! Ezi womoji saziwa lokuba croissants best eParis. nini Paris, ungaphoswa enye kwiivenkile ezithengisa kakhulu eYurophu.
5. eMunich, Jemani - okudla Coffee Fast
Abantu eMunich ukuthanda namakhekhe zabo, kwaye kucacile ukususela noku eliphezulu abanalo Konditorei Kaffee Schneller. Kodwa kutheni na enye 10 Zobhaka Best Ukuze Zama On Your Uhambo To Europe?
Emva kokuba lalingaqini a exakeke dreadfully, belusizi futhi kuyakhathaza ngoMvulo, udinga into ukukhuthaza bakho. Ukuba eMunich, impendulo ifumaneka okumnandi, namakhekhe ekhaya. Uyakwazi findthose kwi coffee Faster, eceleni indebe esithuthuzelayo evuthayo cappuccino okanye kakhokho. Amaxesha amaninzi, akuyi kufuneka isingxengxezo ukutyelela kuyo yonke.
Munich ku Passau Uqeqesha
Nuremberg ku Passau Uqeqesha
6. Zurich, Swizalend - Conditorei Schober
Zurich yindawo esichazayo ukukhangela ukuba kwiivenkile ezithengisa kakhulu eYurophu. i Swiss baye iitshokolethi ezinkulu kunye namagcisa ezingcono khekhe eziya you!. Conditorei Schober yenye kwiivenkile uyakwazi ukufumana kwi "kwikona elimnandi 'Old Town.
Yinto a emveli ngenkangeleko cafe kangako has ezinye ehla kakhulu emangalisayo kunye iitshokolethi ezenziwe ungazama. lokubhalela Lovely, dessert ezinkulu, kunye okulala ukuze kunandipha ehlotyeni - yintoni ukuba ukuthanda?
Asikagqibi ne Zurich kodwa! Kukho indawo elilodwa ifanelwe ukukhankanya kuluhlu lwe kwiivenkile ezithengisa kakhulu eYurophu. Ithathwa njengokuba cafe emihle edolophini, Confiserie Sprungli kakhulu malivakale Zurich.
Le elithile owenza abadumileyo i Luxemburgli macaroons, kodwa chocolate labo iliso kwakunye. amakhono abo Qinisekisa ukwenza yonke ingqondo yakho ukucula. Awukwazi ukutyelela Confiserie Sprungli ngaphandle ukuzama phandle i macarons Luxemburgli!
8. yokubhaka Danish - Kaffehuset - Copenhagen, Dominikha
Awunako athethe ehla ngaphandle beqaphela abanezakhono indlela Danish ezihleli ngokwenza. Yiyo loo nto loo nto ayizange immangalise ukufumana yokubhaka Danish ukusuka Copenhagen phakathi kwiivenkile ezithengisa kakhulu eYurophu. I Kaffehuset yi ndasukuzana eqinisekileyo ukuba indawo, baze boyise ngayo enkosi ehla okunkcenkceshela umlomo-zabo.
abafundi of Copenhagen zithanda Kaffehuset kaThixo khekhe, njengoko kudala ukuba khekhe kakhulu obonwabisayo kakhulu okumnandi kwidolophu. Ungazama ukuxhathisa womba yayo, kodwa uya kuzidla uze luphumelele - kwaye wonwabe kakhulu wenza ukuba.
Enye out-of-France yokubhaka yaseYurophu eyenza igama layo phezu wokuteketiswa sweet French, Lauderee uya enchant wena. Londoners sidumise kule ndawo, yaye wena kanye kakhulu uvakashele eLondon okokuqala.
Macarons are elithile lwabo, yaye uya kukwazi ukubaxelela ngaphandle kunoogxa babo French. I-cream ngaphakathi macaron iya kunyibilika emlonyeni wakho emva kokuba ziwe iqokobhe Shiny-obugolide. Oku akuthethi ukuba ngcono kunokuba!
10. Vienna, Ostriya - Demel
Demel i dessert ukusekwa odumileyo e Vienna ngenxa yesizathu - izonkana eziyolisa intliziyo yabo. I-Ana Demal Torte i showstopper itshokolethi tiered ukuba yenye yezizathu ezenze ukuba igama ogqibeleleyo Demel kaThixo.
Demel ingaphezulu nje oyithandayo kubakhenkethi - imbali yayo phezu 230 iminyaka elide, leyo 'umdla yaye umxhelo. Ezinye amakhono uyakwazi kunandipha kukhona Anut ikeyiki, Esterhazy ikhekhe, Sachertorte, yaye Dobos ikhekhe. Kufuphi, Ukuba ukhangela umthamo yakho yemihla ngemihla ikhekhe, khangela ngakumbi kwe Demel.
Ukulungele ukuba ongasoze (nandi) ikhefu kunye nosapho lwakho yonke? Ndwendwela kwiivenkile ezilishumi kakhulu eYurophu ukusuka kuluhlu lwethu, kwaye uya kuphetshethwa. Qinisekisa ukuba ukucwangcisa iholide yakho incwadi amatikiti etreyini yakho ngexesha!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “10 Egqibeleleyo zobhaka Ukuze Zama lakho lokuya e Europe ” kwi sayithi yakho? ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F10-best-bakeries-europe%2F- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#bakeries #bakery #deserts #khekhe London travelamsterdam travelaustria travelfrance travelgermany travelnetherlands indawo yokuhamba
Izinto To Do On Long Qeqesha Uhamba